जर्मनीको बगैंचे घरमा नेपाली नयाँ वर्ष –जीवा लामिछाने - Sadrishya
जर्मनीको बगैंचे घरमा नेपाली नयाँ वर्ष –जीवा लामिछाने
रुसीहरुको ‘दाचा’ अर्थात फार्म हाउस जस्तै जर्मनीमा ‘गार्डेन हाउस कल्चर’ रहेछ । यो त यहाँका बासिन्दाहरुको जीवन यापनबाट छुट्याउनै नसकिने गरी जोडिएको पाटो पो रहेछ !
शहरको बीच भाग र छेउछाउमा झुपडी जस्ता देखिने ससाना कटेराहरु देख्दा सुरुमा त छक्कै परेको थिएँ । जर्मनीमा समेत झुपड वस्ती !
दाचा वा ‘कन्ट्री’ हाउसभन्दा यस्ता घरको फरक बिशेषता चाहिं के रहेछ भने यी घरहरुमा राती सुत्न पाइदो रहेनछ । करेसाबारीको रुपमा उपयोग गरिने यस्ता क्षेत्रहरु जर्मनीका सबै प्रमुख शहर वरिपरि रन पनि छयास् छ्यास्ती नै रहेछन् ।
राजधानी बर्लिन र फ्रयाँकंफर्ट यस मामिलामा अग्रपंक्तिमा रहेको पाइयो । पूरै जर्मनीमा दस लाखभन्दा बढी यस्ता गार्डेन हाउसहरु रहेको तथ्यांक पो पाइयो ।
जर्मनीमा यो संस्कृति १९ औं शताब्दी मैं शुरु भएको रहेछ । तर पनि व्यापक रुपमा यसको उपभोग भने पहिलो बिश्वयुद्ध पछि शुरु भएको रहेछ ।
युद्धले तहसनहस भएका शहरका बासिन्दाहरुको निजि प्रयोजनका लागि त्यहाँ उत्पादन गरिएको अन्न–फलफूल आदिले निक्कै ठुलो राहत दिएको थियो । वालवच्चाले खेल्ने मैदान र श्रम गर्नेहरुले यसवाट थोरै भए पनि स्वरोजगारी पाएका थिए ।
सरदर चार र पाँच सय वर्ग मिटर क्षेत्रफलका यस्ता प्लटहरुको एक तिहाइ भागमा फलफूल–तरकारी रोप्ने, अर्को एक तिहाइमा कटेरो बनाउने र बाँकि अर्को तिहाइ भाग रिक्रिएशनका लागि खुला राख्नु पर्ने नियम बनाएर शुरु गरिएको रहेछ ।
यो जमिन सरकारी स्वमित्वमा रहने हुनाले उपभोक्ताले भाडा वापत प्रति बर्ष निश्चित रकÞम तिर्नु पर्ने रहेछ । जो सरदरमा प्रतिवर्ष ५०० युरो जति पर्ने रहेछ ।
जमिनको सरसफाई, रूख विरूवाको छाँटकाँट, कटेराको मर्मत सम्भार र गार्डेन क्षेत्र सन्चालक समितिले वनाएको नीति नियमको अवज्ञां गर्नेहरूको प्लट समितिले नियम बमोजिम लिलाम गरीदिने अधिकार पूर्ण अधिकार हुने रहेछ ।
दोहो¥याइरहन नपर्ला, नियम कानूनको पालना गर्ने मामिलामा जर्मनहरू अग्रपंक्तिमा पर्छन् । सुरक्षा आदिको जिम्मा सहकारी समितिले लिने गर्छ ।
यो ठाउं किन्न नपाइने हुनाले लीजमा लिन चाँहनेहरूले निक्कै लामो लाइनमा पालो बस्नु पर्ने रहेछ । कसैले ‘लीज कन्टिन्यु’ गर्न नचाहेमा वा खोसुवामा परेमा मात्रै नयाँ व्यक्तिले प्रवेश पाउने हो । तर त्यस्ता मानिसहरु बिरलै हुने रहेछन् । गार्डेन संस्कृतिप्रति जर्मनहरुको विचित्रको ‘क्रेज’ रैछ ।
बडो मुस्किलले मिलेको हाम्रो गार्डेन हाउस उचित मर्मत सम्भार नगरेको आरोपमा गतवर्ष झन्डै खोसुवामा परेको थियो । यसपटक भने हामी अलि सजग भएका छौं ।
गार्डेनको सरसफाइ, खनजोत र गोडमेल गर्दै यस सिजनको पहिलो ग्रील पार्टीका साथ नयाँ बर्षको बसी बियालोमा साथीहरूसंगं सप्ताहान्त मनाइयो । तस्वीरले यो कुरा बताइहाल्छ !
(चितवन घर भएका जीबा लामिछाने रुसमा इन्जिनियरिङ्ग पढि सकेपछि बन्द व्यापारमा स्थापित भए । लामो समय रसिया बसेपछि उनी अहिले जर्मनीमा बसोवास गर्न थालेका छन् । )